I-MgO I-tube ye-zirconia ye-ceramic eqinile China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ama-Tuber Ceramic > I-Zirconia Tube ye-Ceramic > I-MgO I-tube ye-zirconia ye-ceramic eqinile
span isitayela = "usayizi wefonti: 18px; ukuphakama komugqa: 21px; umbala: # E53333;"> iMagnesia igxilile i-zirconia tube ceramic
Izitshalo ze-Zirconia ze-ceramics zinikeza ukuguguleka okuhle kakhulu, ukubola nokukhukhumeza ukuxuba kanye nokumelana nokushisa, ukuqina kokuqina nokuqina. Lezi zingxenye ze-ceramic zisetshenziselwa izinhlelo zokusebenza ezidlulele kakhulu ezisebenzise ukugqoka kwazo okuphakeme nokumelana nokushisa.
Sanikeza i-Yttria Tetragonal Zirconia Polycrystal (Y-TZP), kunezinhlelo eziningi zeZirconia ceramics ezimbonini zamakhemikhali kanye ne-petrochemical. Banikeza ukubuyiswa kwezomnotho endleleni yokunciphisa izindleko kanye nokuchitha isikhathi. I-Zirconia ceramics ibuye ibe yizinto ezizikhethela ezakhiweni zokunakekelwa kwezempilo, impahla yokugqoka, insimu yokunyathelisa, imboni yezembatho, izingxenye zesakhiwo se-ceramic nezingxenye zobunjiniyela zobunjalo njll.
I-Mg-PSZ i-Zircona Tube Ceramic